Nanganai Heat Pump kuti R & D uye Manufacturing
Aquark ari nyanzvi inverter dziva kupisa pombi mugadziri muna Guangdong, China. Rakavakwa nyanzvi chikwata nemakore 20 nenyanzvi kupisa pombi ruzivo.
Aquark ane boka vaneshungu maindasitiri vagadziri. Vanoremekedza pamusika & vatengi nokusika kunoshamisa Mr. Kunyarara rakanyorwa magadzirirwo. Vacharamba mukusika zvimwe dzakakurumbira mazano nokuda yakanakisisa vatengi ruzivo.
Ndicho chinoumba Simba Aquark ari R & D chikwata, vane vaitungamirira inverter kudzora mamiriro michina uyewo dziva kupisa pombi hurongwa michina. injiniya ose izere pfungwa kutyora kubudikidza chinyakare mabikirwo dziva kupisa pombi, kupa muchiso zvingaitwa itsva yedu yose vakaroorana.